Iimpawu - Wikipedia
Igama elithi iimpawu linganeentsingiselo ezininzi;
1 Ukuba ngumnininto
4 Kwiindawo zemidlalo yeeqonga
5 Amanye amaphepha azalana nala.
Ukuba ngumnininto Edit
Igama elithi iimpawu libhekisa kwinto yomnye umntu. Ukuba umntu uthenga imoto, loo moto ke iba yeyaloo mntu. Umfanekiso oqingqiweyo wakwaLiberty yinto yabantu baseUnited States. Abantu abasebenza ngokuthengisa nokuthenga izindlu basoloko bethetha nge''zinto'', into ethetha izindlu, amagumbi, ii-ofisi, njalo njalo.
Iimpawu zisenokuthetha izinto ezenza okokuba into ibenomdla: izinto eziziimpawu ezithile zento. umzekelo; "I-Elastiki yenziwa yirhabha", ngamanye amazwi irhabha yielastiki. Le ntsingiselo ikufutshane kunaleyo yakwaChemistry (Jonga apha ngezantsi).
KwiKhemestri, igama elithi iimpawu libhekisa kwizinto ngokuzeleyo izinto esizibonayo. Umzekelo, amanzi abayinto emanzi xa engenziwanga nto ehleli ngokwendalo yawo njengamanzi, ayabila ngeqondo lobushushu elili-100, akanambala, akanavumba, njalo njalo. yonke le nkcaza yeyeempawu zamanzi.
Kwiindawo zemidlalo yeeqongaEdit
Kwiindawo zemidlalo yeqonga, iimpawu zibhekisa kwingqokolela yezinto ezisetyenziswa kwezi ndawo kwenziwa kuzo imidalo yeqonga okanye imiculo ye-opera. Nantoni na eyenye esetyenziswayo kodwa ibe ingeyonxalenye yale ngqokolela iluphawu lwento (or "i-prop" ngokufutshane), umzekelo, ifenitshala, umthi, incwadi esetyenziswa ngumlinganiswa esenza ngathi uyafunda, uzalipholile abamtshayayo. Ezi zinto zinakekelwe ngumlawuli wazo. Ngamanye amaxesha, izinto ezincinane ezifana neencwadi okanye abalandeli, ngumlinganiswa omelwe kukuqinisekisa okokuba unazo ezi zinto. Yile nto ke le kuthiwa yi''personal prop".
Amanye amaphepha azalana nala. Edit
Last edited on 9 EyeKhala 2015, at 06:43
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-9 EyeKhala 2015, kwi-06:43